Heritage oo shaacisay halis xooggan oo kasoo socota ku shubashada doorashada - Caasimada Online
Home Warar Heritage oo shaacisay halis xooggan oo kasoo socota ku shubashada doorashada
Muqdisho (Caasimada Online) – Warbixin uu soo saaray machadka daraasaadka ee Heritage oo si qoto dheer looga hadlayey arrimaha doorashooyinka iyo waxa xiligan xal u noqon kara, ayaa waxaa walaac xoogan looga muujiyey hanaanka ay ku socdaan.
Hoos ka aqriso warbixinta oo dhameystiran
• Odoyaasha oo kaliya ayaa uu dowlad-goboleed kastaa u aqoonsan yahay in gacan ka geysan karaan soo xulista 101-da oday-beeleed ee u codeynaya kursi kasta oo aqal hoose ah;
• Kooxda Hirgelinta Doorashada Dawlad-goboleedyada, oo ay soo xushaan madaxweynayaasha dawlad-goboleedyadu, ayaa go’aan ka gaaraya xubnaha ka imanaya bulshada rayidka ah ee odayaasha ka caawinaya soo xulista 101-ka ergay;
• Ma jiraan wax shuruuc ah oo loogu talo galay in lagu hubiyo in kuraasta haweenka la ilaaliyey ama boqolkiiba soddonka kursi ee kootada u ah aan lagu tagrifalin
• Musharaxiinta iyo codbixiyeyaashu waa in ay shahaado danbi la’aan ah ka sitaan booliska degmada- arrintan waa la siyaasadayn karaa
• Doorkii kooxda hirgelinta doorashada federaalka waxaa lagu soo koobay waxyaabo aan badneyn sida shahaado siinta xildhibaannada cusub ee laga soo doorto heer gobol; sida oo kale guddida xallinta khilaafaadka awood looma siin in ay qaataan doorka hubinta ee kaga aaddan odayaasha ay soo gudbiyaan dawladgoboleedyadu.
• Waxa kale oo uu Golaha Wadatashiga Qaranku yareeyay tirada kooramka codbixiyeyaasha, iyaga oo isku raacay haddii 67 codbixiye oo qudhi ka yimaaddaan 101-da ergay in doorashadu hirgalayso. Dowlad-goboleedyadu waxa ay si fudud u diidi karaan ama u eryi karaan codbixiye kasta oo aysan rabin in uu joogo goobta doorashada.
• Golaha Wadatashiga Qaranku waxa ay ku gguuldarraysteen in ay ogolaadaan in si caddaalad ah loogu tartamo kuraasta 54-ka xildhibaan ee Aqalka Sare. Waa in aan laga aqbalin in ay musuqmaasuqaan 275-ka xildhibaan ee Aqalka Hoose, oo ah arrinta muhiimadda ugu weyn leh. Waa in si degdeg ah dibuhabayn loogu sameeyaa heshiiskii 22-ka Agoosto. Arrinta ugu muhiimsan nidaamka doorashada, haddana meesha ka maqani waa caddaalad. Hoggaamiyeyaasha Golaha Wadatashiga Qaranku waxa ay u diideen xuquuqihii aasaasiga ahaa ee ay lahaayeen musharrixiin badan oo u qalma, diyaarna u ah in ay u tartamaan kuraasta Aqalka Sare. Doorashada xildhibaannada Aqalka Hoose ayaa ka xasaasad badan ta Aqalka Sare, sababta oo ah beelaha ayaa isu arka in ay kuraastan iyagu leeyihiin. Golaha Wadatashiga Qaranku waa in ay ogolaadaan sharcinimada odayasha dhaqanka, hoggaamiyeyaasha ganacsatada, bulshada rayidka ah, dhallinyarada iyo haweenka si ay uga mid noqdaan ergada dooranaysa xubin kasta oo ka mid ah 101-da xildhibaan.
• Heshiiskii 22-ka Ogoosto waxa uu sheegaya: in kursi kasta, saddex oday iyo laba qof oo rayid ah, oo ka socda jifo-qabiileed kasta ay dooran doonaan 101-da codbixiye- kuwaas oo u codaynaya xildhibaan kasta. Si looga feejignaado, loogana fogaado colaad beeleed, beel kasta, ama qabiil iyo hay’ad madaxbannaan oo lagu heshiis yahay, waana in ay aqoonsato hab-raaca caddaaladda ah si loo go’aamiyo qofka xubinta ka ah bulshada rayidka ah. Waa in ay jiraan shuruudo la isla qaatay oo lagu soo xulanayo xubnaha rayid ka ah, ee caawinaya ama ku lammaan odayaasha beelaha si loo doorto 101-da codbixiye.
• Qorshe cad, oo la dhaqangalin karo oo hubinaya in boqolkiiba soddonka ay haweenku kootada u leeyihiin waa in la sameeyaa. Fikradda odhanaysa waa in hoggaamiyeyaasha dawlad-goboleedyada iyo kaaliyeyaashooda loo qoondeeyaa kuraasta haweenka xildhibannada ah, iyada oo looga golleeyahay musuqmaasuq iyo kalitalisnimo cad ayaa abuuri doonta isku dhacyo aan loo baahnayn, waana in laga fogaadaa.
• Ururrada bulshada rayidka ah, sida ganacsatada, ururrada haweenka, wadaaddada iyo oday-dhaqameedku waa in ay culays badan saaraan siyaasiyiinta, waana in ay sii wadaan muujinta dareenkooda, iyaga oo hoggaanka Golaha Wadatashiga Qaranka ka dalbanaya hannaan lagu kalsoonaan karo.
• Ururrada bulshada rayidka ah ee dalka ugu waaweyni waa in ay sameeyaan guddi talobixineed oo daacad ah, taas oo warbixin soo saarta marka ay doorashadu dhacdo.
• Beesha caalamka waxa ka saaran masuuliyad aadamenimo in ay si cad uga soo horjeesato heshiisyada cido gaar ahi ku dangaadhayaan iyo sida oo kale xeeladaha siyaasiyiinta ee dib loogu dhigayo doorashada iyo wax isdaba marinta. Maadaama beesha caalamku ay amniga dammiin ka yihiin (iyaga oo ay wakiil uga tahay AMISOM), sida oo kale na ay yihiin maalgeliyaha dowladda Soomaaliya, waxa habboon in ay isticmaalaan saamaynta ay leeyihiin si ay u caawiso, una ilaaliso caddaaladda iyo daacadnimada habkan mar hore lagu xadgudbay. Siyaasiyiinta muhiimka ah ee gacanta ku haya geeddi-socodka doorashada waa in laga diido in ay xasaanaddooda-awoodeed u adeegsadaan in ay hay’adaha dawliga ah ee Soomaaliya xasaanadda sharciyeed ka xayuubiyaan, sida oo kale na waa in laga diido in ay sidii hore oo kale awood ku muquunin ugu guulaystaan.